Real Madrid Iyo Atletico Madrid Oo Guulo Gaadhay & Barcelona Oo La Garaacay Kana Hadhay tartanka Horyaalka La Liga. – Kooxda.com
HomeLa LigaReal Madrid Iyo Atletico Madrid Oo Guulo Gaadhay & Barcelona Oo La Garaacay Kana Hadhay tartanka Horyaalka La Liga.
May 16, 2021 Abdiwali Adan Jamac La Liga, Wararka Maanta 0
Horyaalka La Liga ayaan wali lagu kala bixin iyada oo kooxaha jaarka ah ee Real Iyo Atletic isla aadi doonaan maalinta ugu dambaysa horyaalka halka ay Barcelona ka hadhay tartanka kadib guuldaro ka soo gaadhay Celta Vigo.
Athletic Bilbao Vs Real Madrid:
Kooxda Real Madrid ayaa guul dirqi ah ka gaadhay kooxda Athletic Bilbao kulan ka dhacay San Mames iyaga oo si toos ah ula wareegay hogaanka horyaalka La Liga kadib guushaas.
Kulanka ayaa ahaa mid aad u adag labada kooxoodbana u ciyaareen si taxadar ku jiro waliba aanay isku deg-degayn marka la eego dhinaca weerarka.
Real Madrid ayaa sidii caadada ahayd maamulaysay ciyaarta marka laga hadlo dhanka kubad haysashada Halka Athletic Bilbao adeegsanaysay weeraro rogaal celis ah iyo kubado orod ah.
Los Blancos ayaa 11 laad ku laagtay goolka Athletic Bilbao laakiin kaliya 2 la heshay goolka halka ay Athletic Bilbao goolka Real Madrid ku laagtay 8 hal laad-na la heshay goolka Real Madrid.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay gool la’aan labada kooxood ah maadama ayna labadooduba wax gool ah kala dhalin.
Laakiin daqiqiadii 68-aad ee ciyaarta ayay Real Madrid dhalisay goolka 1-aad iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Nacho kaas oo kooxdiisa u dhiibay hogaanka ciyaarta waliba ku hogaamiyay guusha.
Atletico Madrid Vs Osasuna:
Kooxda Atletico Madrid ayaa dhankeeda guul soo laabasho leh ka gaadhay kooxda Osasuna kulan looga hor maray goolka laakiin Roji Blancos ayaa soo laabasho cajiib ah samaysay waliba sii waday hamigeeda ku guulaysiga horyaalka.
Xiddigaha Renan Lodi iyo Luis Suarez ayaa Atletico Madrid ku hogaamiyay guul soo laabasho leh iyaga oo labada gool kala dhaliyay daqiiqadihii 82-aad iyo 88-aad.
Celta Vigo Vs Barcelona:
Kooxda Barcelona ayaa dhankeeda si rasmi ah uga hadhay tartanka horyaalka La Liga ka hor kulanka ugu dambeeya ee xilli ciyaareedka kadib guuldaro ay kala kulantay kooxda Celta Vigo.
Barcelona ayaa ku hor martay goolka iyaga oo uu Lionel Messi u dhaliyay goolka 1-aad daqiiqadii 28-aad kaas oo hogaanka u dhiibay kooxdiisa.
Laakiin Celta Vigo ayaa ku jawaabtay laba gool oo uu dhaliyay xiddiga Santi Mina kaas oo daqiiqdii 38-aad iyo 89-aad u kala dhaliyay kooxdiisa Celta Vigo xilli ay Barcelona 10 xiddig ku dhamaystay daqiiqadihii ugu dambeeyay kadib markii Clement Lenglet loo taagay kaadhka cas.
Sii Akhriso: Waa Maxay Sirta Raaxada Jacaylka?
Daawo: Goolkii Taariikhiga Ahaa Ee Uu Dhaliyay Alisson.